गाउँ गाउँबाट उठे, बस्ती बस्तीबाट उठे « Drishti News
गाउँ गाउँबाट उठे, बस्ती बस्तीबाट उठे
राजनीति भनेको संभावनाको कला हो भनिन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिष्टबाट पूँजीवादीतर्फ संक्रमित हुँदैगरेका भियतनाम र कम्वोडियामा बुद्धधर्मका अनुयायीहरुलाई गौतम बुद्धको जन्मथलो– लुम्विनीको भ्रमणका निम्ति आकर्षित तुल्याउन ती देशको भ्रमणमा निक्लिएका मात्र के थिए, काठमाडौंको बौद्धका स्थानीय जनता विद्रोहमा उत्रिए । यद्यपि उनीहरु राजनीति र धर्मका कारणले होइन, बौद्ध र साँखु बीचको सडकबाट चार वर्षदेखि हराएको सरकार खोज्न संघर्षमा उत्रिएका थिए । हराएको सरकार छिटै प्रकट भयो– आन्दोलन दबाउने अन्ध तथा स्थूल शक्तिका रुपमा । अत्यधिक प्रहरी शक्तिको प्रयोग गरेर सरकारले स्थानीय जनतामाथि त्यस दिन लाठीचार्ज मात्र गरेन, अश्रुग्याँसको समेत प्रयोग ग¥यो र धेरैलाई घाइते पनि तुल्यायो । तैपनि जनता डराएर भागेनन्, प्रहरी दमनविरुद्ध चट्टान बनेर सडक कब्जा गरिरहे । आफ्ना माग पूरा गराई छाड्न कटिवद्ध सत्याग्रहीको त्यस्तो भीडलाई जब प्रहरीको लाठी र अश्रुग्याँसको गोलीले पनि हटाउन सकेन, तब प्रहरी आफैं पछि हट्यो । त्यसरी त्यो पूरै दिन बौद्ध र साँखुको त्यो सडक, विद्रोहीको नियन्त्रणमा रह्यो । साँझ सडकका ठेकेदार र आन्दोलनकारीका बीचमा छ बुँदे समझौता भएपछि आन्दोलन समाप्त भएको घोषणा भयो र सडकबाट उनीहरुको कब्जा पनि हट्यो ।
त्यसरी त्यस दिन दिनभरि बौद्ध र जोरपाटीको सडकखण्ड नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट फुत्केर आन्दोलनकारीको कब्जामा पुगेको थियो । त्यहाँ न संविधान, न ऐन र नियमले काम ग¥यो । सडक बनाउने ठेक्का लिएका ठेकेदारले पनि त्यत्तिखेर आन्दोलनकारीबाट हुने दण्डबाट जोगिन सरकारी सुरक्षा व्यवस्थामाथि विश्वास गर्न सकेनन्, आन्दोलनकारीसंग सम्झौता गर्न पुगे । ठेकेदारलाई बचाउन र सडक खोल्न त्यहाँ न संघीय सरकार आयो, न प्रान्तीय सरकार, न स्थानीय सरकारले आफ्नो मुख देखायो । त्यस्तो स्थितिलाई अंग्रेजी भाषामा भन्नुपर्दा “सिस्टमको टोटल कोल्याप्स” भन्छन् । त्यही भएको थियो ।
बौद्धका जनताले गरेको आन्दोलन त्यो सरकारले आतंकवादी घोषित गरेको नेकपा विप्लवको वितण्डा थिएन । देशको मुख्य विरोधी दल– नेपाली कांग्रेसले विरोधको धर्म निर्वाह गर्न आन्दोलनमा उतारेको जागरणको जमात पनि थिएन । न त्यो नागरिक समाजले उठाएको नागरिक चेतनाको भ्रम थियो, न स्थानीय उपभोक्ताको जागरुकताको परिचयाक थियो । त्यो एनजीओ र आइएनजीओको स्पोन्सरसिपको संयुक्त अभियान पनि थिएन । त्यो त चार वर्षअघि सरकारले भत्काएको सडक, अहिलेसम्म नबनेका कारण पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा उड्ने धुलोबाट आजित भएका पीडित जनताको आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो । सडक चौडा पार्न सडकका दुई किनाराका पुराना संरचना भत्काउन डोजरको प्रयोग भयो । व्यक्तिका पर्खाल र फुटपाथ भत्कियो, नाली फुट्यो । तर सडक किनारका रुख उखेलिएन, बिजुलीका पोल पनि हटेनन् । झन् सडक बन्ने र कालेपत्रे हुने त सवालै उठेन । उल्टो, खाल्डाखुल्डी गहिरिंदै गए । नाली बनाउने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम नभएपछि अत्यधिक सवारीका साधनको चाप र तिनले उडाएको धुलो र धुँवाले सडकका दुवै किनारका पसले र पैदल हिड्ने यात्री दुवैथरिको समस्या बढेको बढ्यै भयो । चारवर्षसम्म जनताका त्यस्ता नारकीय यातनाको अन्त्यका लागि गरेका सम्पूर्ण प्रयास निस्फल भएपछि भुक्तभोगी स्थानीय जनताले आफ्ना व्यवसाय र पसल बन्द गरेर सडकमा उत्रनुको विकल्प थिएन । मजवुरीका नाम महात्मा गान्धी, त्यसै भनिएको त होइन नि ! उनीहरुले सडक आफैं कब्जामा लिए । त्योबाहेक उनीहरुसंग आफ्नो काम, आफैंले गराउने अर्को उपाय पनि थिएन !
नेकपा बन्नुभन्दा धेरै अगाडि, जुन बेला उनीहरु नक्सालपन्थी माले थिए, त्यसबेलाका नेता तथा कार्यकर्ताले गाउने एउटा क्रान्तिकारी गीत थियो–
त्यो गीत अहिलेका नेकपाका कर्णाधारहरुलाई स्मरण गर्ने जाँगर र फुर्सद शायद दुवै नहोला तर बौद्ध आसपासका जनताका निम्ति त्यही प्रेरक बन्यो । उनीहरुसंग अर्को कुनै विकल्प बाँकी बचेको थिएन । जे थियो, त्यो त्यही थियो । त्यही लिएर उठे मात्र होइन, जुटे पनि । धैर्यको बाँध भत्किसकेको थियो । जनआक्रोश बगेर सबै बौद्धको सडकमा पोखियो । त्यसपछि जे भयो, त्यो इतिहासको एक अध्यायका रुपमा अंकित भइसकेको छ ।
त्यसअघि उनीहरु, आफ्ना समस्या लिएर वडा कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सबै ठाउँमा धाए । रोइकराई गरे । ठेकेदारले ठेक्का लियो भन्दैमा सरकारको जिम्मेदारी कसरी सकिन्छ ? प्रश्न उठाए । लौ न केही गरिदेओ भनेर सबैलाई गुहारे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, डिभिजनल इन्जिनियर, मेयर, वडाध्यक्षलगायत नेताका निवास र ठेकेदारका ठेगानामा पनि धाए । सबैले आश्वासन दिए, काम कसैले सिन्को भाँचेनन् । त्यसपछि वाध्य भएर उनीहरु सडकमा उत्रिए र ठेकेदारलाई आफैंले ठेगान पनि लगाइछाडे । जुन काम ठेक्का दिने सरकारले गराउन सकेको थिएन, त्यो काम आन्दोलनकारीसंग सम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि सुचारु भयो ।
मानिसहरु भन्छन्, जुनसुकै बहानामा किन नहोस् त्यसरी जनताले कानून आफ्नो हातमा दिने काम गर्नु हुन्थेन । कानूनी भाषामा त्यो त बगावत अथवा विद्रोहको श्रेणीमा पर्ने गम्भीर अपराध हो । राज्यका विरुद्धको बगावतलाई कुनै पनि सरकारले सहन गर्न सक्तैन, गर्न पनि हुँदैन । साथमा उनीहरु यो पनि भन्छन् कि जुन राज्यले जनताका न्यायोचित माग उपलब्ध तथा उपयुक्त माध्यमबाट बारम्वार उठाउँदा पनि सुन्दैन र उनीहरुका स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने सडक प्रदूषण रोक्न कदम चाल्दैन, त्यस्तो अनुत्तरदायी सरकारका विरुद्ध विद्रोह गर्नु नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । बौद्धका सचेत तथा जागरुक जनताले आफ्नो त्यही अधिकारको प्रयोग गरेका हुन्, तसर्थ त्यसलाई अपराधको संज्ञा दिन सकिन्नँ । त्यो श्रेणीमा राख्न पनि हुँदैनँ ।
बौद्ध घटना, सरकारका लागि आँखा खोल्ने चेतावनी मात्र पनि होइन । त्यो त सबै राजनीति दल र शक्तिका निम्ति पनि भूल्न नहुने पाठ हो कि जनता भलै आफ्ना काम छाडेर दिनदिनै आन्दोलनमा उत्रने गर्दैन । तर जब उत्रन्छ, तब त्यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन । उनीहरुको माग सीमित थियो । समय सीमा तोकेर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेकेदारसंग सम्झौता हुनेवित्तिकै त्यो समाप्त भयो । तर त्यसले आफ्ना माग पूरा गराउन गैर राजनीतिक तरीकाले आन्दोलन को जुन झिल्को जगाई दिने काम गरेको छ, त्यसको चमक यत्तिकैमा सीमित हुन संभव छैन । त्यसले धेरैलाई अन्यायका विरुद्ध उठ्ने साहस र प्रेरणा जगाउने काम ग¥यो भने आश्चर्य हुने छैन । अहिलेसम्म राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोगविनाको आन्दोलनले सफलताको शिखर छोएको थिएन । बौद्ध घटनाले नयाँ उदाहरण स्थापित गरेको छ । सरकारका निम्ति तसर्थ, थप सतर्कताको खाँचो किन पनि छ भने बौद्धदेखि साँखुसम्मको सडकको जुन अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था विद्यमान नभएको कुनै जिल्ला छैन । वास्तवमा मेचीदेखि महाकालीसम्म साना ठूला जति सडकमा कालोपत्रे भएका छन्, तिनको अवस्था बौद्धकोभन्दा कम भयावह छैन । त्यसमाथि हालसालै बनेका असंख्य सडक संजालका अवस्था सबैतिर लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ । त्यसैले सरकारले त्यो घटनालाई बुढी मरी भन्नेभन्दा पनि काल पल्कने शंकाले हेर्नुपर्छ । भनाई पनि छ, भाग्यमानी देखेर चेत्छ, अभागी परेर मात्र चेत्छ । वर्तमान सरकार अभागी अवश्य होइन, तर भाग्यमानीचाहि हो कि होइन, त्यो उसले चाल्ने भविष्यका कदमले सावित गर्नेछ ।
काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीति दलहरुको भएपनि संविधानको मर्मविपरीत ब्याख्या नेताहरुले गरिँदा